Kwangathi amaholide - isikhathi esingcono kakhulu iqhaza uhambo yamanzi Karelia. Kwakuthinta ngoMeyi, kukhona ukuncibilika asebenzayo kweqhwa, okwenza nomfula-esilazayo egcwele, omatasatasa futhi emangalisayo ezikhangayo kubathandi Alloys. Miss ukuthi isikhathi Rafting abalandeli noma ingxubevange ku catamarans - okulingana kokulahlekelwa unyaka wonke. Kwase kuphele amashumi eminyaka ukuphumula Karelia Spring iphupho ngoba watermen Okuyınqo, aphethwe Rapids okuyingozi kayaks. Namuhla e Karelia Alloys ayatholakala izivakashi nge akanaso isipiliyoni kanye lezitsha entsha evikelekile esengeziwe kude - Raft. Ngo arsenal of ejensi travel ukunikela izinkambo ngesikhathi Meyi amaholide e-Russia, zikhona eziningana imizila phezu Karelian imifula ubude enzima nelula. Beginners Umenyiwe May kude ku Shuya emfuleni, watermen abanolwazi - ku Ukse ubize Tohmajoki kakhulu.
Uksa emfuleni, noma isitayela Karelian Uksunyoki, sivela ezingeni ukuphakama ezingaphezu kuka 177 metres kusukela echibini Kuykkayarvi, oqala iqhwa ncibilika liphenduka isilo ngempela ukugqashula emangqamuzaneni emincane. Umfula lidumile amanzi izivakashi ngenxa eziningi Rapids amasayithi. Thina rafted ngokusebenzisa ke akwenzeki nakanye igama imibundu Pink Elephant, Windmill Canyon sezigidigidi futhi abangele ukusakaza enamandla izinkumbulo. umzila Dynamic ekugembuleni Ukse unika izivakashi owakhetha seholidi Karelia, a real adrenaline rush futhi injabulo.
Kulabo abasebenza uphumule nomndeni wonke, Wabasaqalayo izivakashi kanye lenhlangano yokuzilibazisa yenkampani evumelana emfuleni Shuya. Uma ungeyena nomsubathi, kodwa alangazelela ukuthola icala omuhle amandla futhi drive imisebenzi ongaphandle, ke olufanele kangcono Shuya ingxubevange kunamanye Karelian emfuleni ezokuthutha ngenxa yokufinyelela nokuba yinkimbinkimbi ngokulinganisela. Ngokuvamile, Rafting emfuleni Shuya wenza ingxenye izinkambo Meyi kuhlanganiswe ukuthi sihlanganise imisebenzi yokuzilibazisa ezifana Rafting, isikwele ibhayisikili Safaris futhi intaba ekhuphuka.
Tohmajoki River egeleza ngokusebenzisa North Priladozhje at amakhilomitha yayo amahlanu ubude ine iconsi jikelele ezingeni amanzi angaba ngu-70 metres, nge ingxenye enkulu ekudonseleni ewela plums wabhubhisa amadamu nezimpophoma. Qedela emfuleni kungaba njengoba kancane njengoba 3-4 izinsuku, lapho, ngokuhlanganiswa ukusondela isihlobo enhlokodolobha enyakatho - Petersburg - kwenza Tohmajoki omunye wemifula oyisilomo Karelia spring Alloys. izinkambo Extreme komfula, ihlelwe travel ejensi zendawo, kukhona Alloys catamarans ngomuzi nomzana ngomzana Matkaselka Helylä uhlelo uhambo buhlanjululwe: Ukuvakashela kwepaki entabeni "Ruskeala" lesikhumbuzo ukuze umlando wezimayini Russia, wadala emhlabeni olunothile Marble Canyon. Enye Luhambo emzileni kukhona Ruskeala izimpophoma, okuyinto baziwa abaningi babo hit izikrini ngo-1972, ifilimu Soviet ethandwa "The Dawn Lapha Ingabe epholile".
Rafting e Karelia - kuba ithuba ukuhlola ngokwabo emandleni bese uyazama isandla sakho ezidlulayo zeziyaluyalu entwasahlobo sokuvukela emfuleni kule nkampani abathanda futhi abathanda amaholide asebenzayo. Ezinsukwini ezimbalwa nje uzobe wachitha ngesikhathi sokungcebeleka Karelia May amaholide, futhi yini ocebile, nosizo nehuha babonakala!